Iichips zeCofi Lake zinokuba lukhetho luka-Apple kwi-iMac elandelayo | Ndisuka mac
Iichips zeCofi Lake zinokuba lukhetho luka-Apple kwi-iMac elandelayo
Iiprosesa Isizukulwana se-8 seCofi Lake, eyabhengezwa nguApple ukuphela kukaSeptemba, inethuba elihle lokuba ngumgqatswa ofanelekileyo kwiMac elandelayo yenkampani. Ziiprosesa ezinamandla ezilungiselelwe ukusebenza kwizixhobo ezimi ndawonye. Kodwa esona sizathu siphambili linani le-nuclei, ethi zisuka kwisine ziye kwisithandathu. Ezi processor, njengoko siza kubona kamva, zisa ukusebenza ngakumbi kuneekhompyuter zangoku. Iimvavanyo zokuqala ezenziweyo zenziwe kunye nezona zinamandla. Sithetha nge-i7-8700K, kunye ne-6 cores kwi-3,7 GHz kunye ne-4.7 GHz turbo boost, xa kuthelekiswa neMac Retina 5K, ene-7-core i7700-4K.
Eyona ndlela yokuvavanya izixhobo kwincopho yokusebenza kwayo kukuyicela ividiyo okanye isabelo sokufota. Kule meko, iinkqubo ezininzi zisetyenzisiwe. Sebenzisa Igumbi lokukhanya ihambisa inzuzo yexesha 8,9%. Endaweni yoko, yenza iifoto zeRAW nge I-DxO Optics Pro, imele inzuzo yokusebenza ye 25,9% kunye nekhowudi yevidiyo kwi-H.264 kunye nenkqubo x264, Iphucula ukusebenza kwifayile ye- 41% Enkosi kwiiprosesa ezimbini ezongezelelweyo.
Olunye usasazo luhlalutya ukuba iinkqubo ezithile kufuneka zilungiswe ukuze zisebenzise iiprosesa ezi-6 ezinyukelwa yiCofi Lake. Kodwa nangona kunjalo, ukusebenza namhlanje kunokwanelisa.
ICofi Lake, yenzelwe phantsi kwe- Uyilo lwe-14 nm ++. Yiprosesa elungiselelwe iimfuno zoomatshini abakhoyo nabangoku. Usebenze ngokukodwa ukuphatha iifayile ezi-4k, ngama-32% ezivuno eziphezulu xa kuthelekiswa nomanduleli wayo. Akuqinisekiswanga yi-Intel, kodwa banokuba ngabokuqala ukudibanisa umqhubi othile weThunderbold 3.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iichips zeCofi Lake zinokuba lukhetho luka-Apple kwi-iMac elandelayo
Izikrini kunye neemfihlakalo, ukujongana kwemihla yeMac yakho
Utshintsho kubunkokheli buka-Apple kwi-iCloud